အရောင်းအဝယ်အတွက် ဘယ်အချိန်အပိုင်းအခြားကို သင်သုံးသင့်သလဲ?
အရောင်းအဝယ်အတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား ဘယ်လိုရွေးမလဲ
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်မှသင်ကြားဆွေးနွေးခြင်းတွင် အမေးအများဆုံးထဲမှ တစ်ခုမှာ "အရောင်းအဝယ်အတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား ဘယ်လိုရွေးမလဲ"ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးမှာ ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်!
ပထမဦးစွာ၊ "အမြင့်" နှင့် "အနိမ့်"လို့ခေါ်ကြတဲ့ အချိန်ကာလနှစ်ခုကြား ခွဲခြားမှုတစ်ခုလုပ်သင့်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ခုကြားမှ ဘောင်လေးသည် ၁-နာရီ အချိန်အပိုင်းအခြား(H1) ကို ဖြတ်သွားသည်။ ပိုတိုတောင်းသည့်ကာလများနှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားများကို နိမ့်သည့် (သို့) သေးငယ်သည့် (၃၀-၊ ၁၅-၊ ၅-မိနစ်) အနေဖြင့်ယူဆစဉ်၊ ပိုကြာတဲ့ကာလများနှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားများသည် မြင့်သည့်၊ ကျယ်ပြန့်သည့် (သို့) ကြီးမားသည့် (၄-နာရီ၊ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်) အနေဖြင့် သတ်မှတ်ခံရပါသည်။
အရောင်းအဝယ်အတွက် သင့်မှာရှိသည့်အချိန်။ အရောင်းအဝယ်အတွက် သင်အသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်သည် အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာအတွင်း အရောင်းအဝယ်များများပြုလုပ်လိုပါက၊ ပိုတိုတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားများကိုရွေးပြီး၊ scalper တစ်ဦး (သို့) နေ့စားရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာပါ။ အချိန်ပြည့် ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ဘဲ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၁-၃ကြိမ်အရောင်းအဝယ်ထက် မပိုဘူးဟု စီစဉ်ထားလျှင်တော့၊ ပိုကြာတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားများကို အလေးထားပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ ရိုးရှင်းပါသလား? သင်လောင်းလိုက်ပါ!
အချိန်အပိုင်းအခြားအစုံတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးများ ရှိကြပါတယ်။ ပိုကြာတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားသည် "ဈေးကွက် ဆူပူမှု"ကို ဖယ်ထုတ်စေနိုင်ပြီး၊ ကြီးမားပြီး၊ "ခမ်းနားသော" ဈေးနှုန်း အတက်အကျများကိုဖမ်းမိစေနိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲ၊ ပိုတိုတောင်းတဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားများမှာ ပိုများတဲ့အရောင်းအဝယ်တွေကို လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အတိုးအတာဖြင့် သင့်အားငွေရခြင်း ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်: သင်အရောင်းအဝယ်များများ ဖွင့်လေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်းအဝယ်များ သင်ရဖို့ အခွင့်အရေးများလေပါပဲ။
သင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ရောင်းဝယ်သည့်အခါ၊ သင်သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်နေဖို့ သေချာပါစေ။ သင့်ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်ကို သုံးသပ်ပြီး၊ သင့်အကျိုးအမြတ်အတွက် နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချပါ။
ပိုမြင့်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ဖိအားကို ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မြန်ချနိုင်ပြီဆိုရင်၊ ပိုတိုတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားများမှာ ရောင်းဝယ်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါက၊ ခေါင်းအေးအေးထားနိုင်ရန်၊ အရှုံးတွေကနေမြန်မြန် ပြန်ထနိုင်ပြီး၊ ဈေးကွက်ကို လက်စားချေချင်တဲ့ဒေါသကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းဆိုရသော်၊ သင်အမြတ်ကြီးရတဲ့အခါ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုထဲကို အလွန်အကျွံလောင်းချလိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင် သင့်စိတ်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုတိုတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားမှာ လုပ်တဲ့ ရေတိုအရောင်းအဝယ်သည် ဈေးကွက်ခံစားသိရှိမှုကို ခံစားစေမှာဖြစ်ပြီး၊ အလွန်တက်ကြွတဲ့ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်စေမှာပါ။
တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ၊ လေးလေးနက်နက်တွေးဖို့ သင့်မှာသည်းခံနိုင်မှုနှင့် အလားအလာရှိသည်ဆိုပါက၊ ပိုကြာတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဒီမှာတော့ အချက်ပြကောင်းတစ်ခုပေါ်မလာခင်ထိ အရင်စောင့်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီ့နောက် ဈေးနှုန်းက သင့်ပစ်မှတ်ကိုရောက်တဲ့ထိစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်အလျင်မလိုဘဲ၊ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုစီတိုင်းနှင့် ရလဒ်တွေကို သုံးသပ်ဖို့အချိန်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်။ ဒါတကယ့်အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်လား? ဇယားနှစ်ခုပြထားပါက၊ ဘယ်ဟာက ပိုကြာတဲ့အချိန်လဲ၊ ဘယ်ဟာက ပိုတိုလဲဆိုတာ သင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ MACD နှင့် moving averagesလို အညွှန်းကိန်းများ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ Head and Shoulders(ခေါင်းနှင့် ပုခုံး) (သို့) Double Top(နှစ်ထပ်ထိပ်တန်း)လို ပုံစံများနှင့် support နှင့် resistance လိုအရာမျိုးတွေဟာ ဘယ်အချိန်အပိုင်းအခြားမှာပဲ ရောင်းဝယ်ပါစေ တူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ တူညီတဲ့ကိရိယာတွေကို မတူညီတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားမှာအသုံးပြုခြင်းသည် မတူညီတဲ့ရလဒ်များကို ရစေသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၊ တကယ်တမ်းက ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးနှင့် သူ/သူမ၏ အရည်အသွေးပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွင်း မတည်ငြိမ်မှု။ M30 နှင့် D1 အချိန်အပိုင်းအခြားကြားက ကွာခြားချက်သည် နောက်ပိုင်းထက် ရှေ့ပိုင်းမှာ နည်းပညာပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖြစ်ေပါ်စေပါလိမ့်မည်။ ဖြည့်စွက်ရသော် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ကို အမြဲဆန်းစစ်ပြီး၊ ဖြစ်ရပ်များကာလတွင် အရောင်းအဝယ်ရှောင်ရန်ရှိ၊မရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရန်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် သတင်းများအပေါ် ရောင်းဝယ်ရန်ကြိုးစားကြည့်နိုင်သော်လည်း ပိုတိုတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားရှိ အရောင်းအဝယ်များသည် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် ပိုပြီးအကဲဆတ်လေ့ရှိသည်။
ကြေးအဟ။ ပိုတိုတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်မှာ ရောင်းဝယ်မည်ဆိုပါက ကြေးအဟအကြောင်းထည့်စဉ်းစားမည်မှာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည် ပိုများတဲ့အရောင်းအဝယ်များကို ဖွင့်ပြီး၊ ပိတ်ပါလိမ့်မည်။ ရေတိုအရောင်းအဝယ်တစ်ခုမှ ရတဲ့အမြတ်သည် ရေရှည်အရောင်းအဝယ်တစ်ခုမှရသည့် အမြတ်ထက်နည်းပါးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကြေးအဟသည် ၎င်း၏ကြီးမားသည့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကိုသတိထားပြီး၊ ပိုတိုတဲ့အချိန်ကာလ အရောင်းအဝယ်အတွက် ကြေးအဟနည်းမည့် ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
မတူညီတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားများမှာ ဈေးကွက်ကိုကြည့်ရတာ အလွန်ကွဲပြားပါသည်။ W1မှာ အကျလမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်ပြီး၊ H4တွင် အတက်လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
တချို့ရောင်းဝယ်သူတွေသည် တစ်ခုတည်းသောစံထားစရာ အချိန်အပိုင်းအခြားကို ရှာဖွေတတ်ကြသည်။ အခြားသူတွေကတော့ အရောင်းအဝယ်တိုင်းအတွက် အချိန်အပိုင်းအခြားအားလုံးကို ကြည့်ရန်ကြိုးပမ်းတတ်ကြသည်။ M5တွင် အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကိုချိန်ညှိဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် ထိုမှာအခြေအနေများသည် ဆက်တိုက် အမြန်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ နေ့စဉ်ဇယားမှ ဘယ်လိုအကြံဥာဏ်များသူတို့ရလဲဆိုတာ မေ့သွားကြပါတယ်။
အချိန်အပိုင်းအခြား တော်တော်များများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပုံတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံမြင်စေနိုင်ပါသည်။ ဒါကို "များစွာသော အချိန်အပိုင်းအခြား သုံးသပ်ချက်"ဟု ခေါ်သည်။ သင်ဘယ်အချိန်အပိုင်းခြား (ပိုကြာ (သို့) ပိုတို)ပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ထားလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ၊ သင်သုံးမည့် ၂-၃ခုကိုရွေးပါ။ ဥပမာ၊ သင်သည် swing (အချိန်တိုအတွင်း) ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် နေ့စဉ်ဇယားကိုအသုံးပြုပါ။ H1မှ ရေတို-လမ်းကြောင်းကို ပြနေစဉ်အတွင်း၊ အပတ်စဉ်ဇယားသည် အဓိကလမ်းကြောင်းကို သတ်မှတ်ရန်ကူညီပေးပါသည်။ ဒီအခြေအနေတွင်၊ M5ကို ဆင်းသွားစရာအကြောင်း မလိုပါဘူး။
များစွာသော-အချိန်အပိုင်းအခြားသုံးသပ်မှု၏ အဓိကစိတ်ကူးမှာ အရင်ဆုံးပိုကြာတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကို သုံးသပ်ပြီးမှ ပိုတိုတဲ့တစ်ခုဆီ ရွှေ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနည်းဖြင့် ပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံကြီးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အော်ဒါအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာကို ရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောအချိန်အပိုင်းအခြားများ အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း ပိုသိလိုပါက၊ စခရင် သုံးခုအရောင်းအဝယ် စနစ် အကြောင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပါ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း အကောင်းဆုံးအချိန်အပိုင်းအခြားကိုရွေးရန် မှန်ကန်သည့်နည်းလမ်းမရှိသော်လည်း၊ ရောင်းဝယ်ရန် အချိန်အပိုင်းအခြားအစုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ သင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံး အချိန်အပိုင်းအခြားကိုရှာရန် ဤအကြံပြုချက်များကိုအသုံးပြုပါ။သင့်အရောင်းအဝယ် ကံကောင်းပါစေ!